Brad Pitt – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Deadpool2(2018) Unicode Deadpool ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ကားလုံးက Deadpool ပီသခဲ့တယ်။ အရင်ကားထက်ပိုပြီး ပြောင်၊ ပိုပြီးအရှက်မရှိ၊ ပိုပြီးကြမ်းထားတယ်။ အထူးသဖြင့် Credit scene တွေဆို ရစရာကိုမရှိဘူး။ Plot ပိုင်းမှာ အရမ်းကြီးတော့မရှိ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းအများစုက action ရယ် ဓာတ်ပူး မျက်နာပြောင်နေတာရယ်က အဓိက များတယ်။ ကိုဓာတ်ပူးရဲ့ X Force အဖွဲ့ skill ကိုပြထားတာ‌လည်း တော်တော်မိုက်တယ်။ တော်တော်ကိုကြမ်းပြထားနိုင်တယ်။ ထင်မထားဘူး။ Domino နဲ့ Cable ကိုပုံဖော်ထားတာလည်း တော်တေယ်လေးကောင်းတယ်။ Cable လုပ်တဲ့ Thanos ကြီးလည်း သရုပ်ဆောင်လန်ထွက်နေတာပဲ။ မဆီမဆိုင်စဉ်းစားမိတာက Deadpool ဘေးမှာနေရင်း Cable ကြီး မရယ်မိအောင် တော်တော်လုပ်ယူရမလားပဲ။ Deadpool2ဟာ တစ်ကားလုံးနီးပါး ဗြင်းနေတာနဲ့ ပြောင်နေတာတွေ ချည်းမို့ လုံးဝ ကြည့်ပျော်တဲ့ ...
Once UponaTime… in Hollywood (2019) Unicode တစ်ခါတုန်းက ဟောလိဝုဒ်မှာ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ ရုပ်ရှင် ၁၀ ကား ရိုက်ပြီးရင် အနားယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဂန္ဓဝင်ဒါရိုက်တာကြီး ကွင်တင် တာရန်တီနိုရဲ့ ၉ ကားမြောက်ရုပ်ရှင်ပါပဲ။အရင်ရှစ်ကားကတော့ Django Unchained (2012) … The Hateful Eight (2015) … Death Proof (2007) …Inglourious Basterds (2009) … Reservoir Dogs (1992) … Kill Bill: Vol. … Kill Bill: Vol. … Jackie Brown (1997) ဆိုတဲ့ကားတွေပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဟောလိဝုဒ်ခေတ်ဟောင်းကို ပြန်တမ်းတဖို့ သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ခေတ်ဟောင်းကောင်းဘွိုင်ကားအကြောင်းတွေ၊ ဟောလိဝုအထာတွေ၊ အဲဒီခေတ်ရဲ့ ဟစ်ပီတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါပဲ။လီယိုနာဒို၊ ဘရက်ပစ်၊ မာဂေါ့ ရော်ဘီ တို့ အဓိက ...
IMDB: 7.8/10 293811 votes
Once UponaTime … in Hollywood (2019) Unicode တစ်ခါတုန်းက ဟောလိဝုဒ်မှာ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ ရုပ်ရှင် ၁၀ ကား ရိုက်ပြီးရင် အနားယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဂန္ဓဝင်ဒါရိုက်တာကြီး ကွင်တင် တာရန်တီနိုရဲ့ ၉ ကားမြောက်ရုပ်ရှင်ပါပဲ။အရင်ရှစ်ကားကတော့ Django Unchained (2012) … The Hateful Eight (2015) … Death Proof (2007) …Inglourious Basterds (2009) … Reservoir Dogs (1992) … Kill Bill: Vol. … Kill Bill: Vol. … Jackie Brown (1997) ဆိုတဲ့ကားတွေပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဟောလိဝုဒ်ခေတ်ဟောင်းကို ပြန်တမ်းတဖို့ သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ခေတ်ဟောင်းကောင်းဘွိုင်ကားအကြောင်းတွေ၊ ဟောလိဝုအထာတွေ၊ အဲဒီခေတ်ရဲ့ ဟစ်ပီတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါပဲ။လီယိုနာဒို၊ ဘရက်ပစ်၊ မာဂေါ့ ရော်ဘီ တို့ အဓိက ...
World War Z (2013) ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းေဟာင္း Gerry Lane ဟာ Philadelphia က လူေနထူထပ္တဲ့ အရပ္မွာ မိသားစုနဲ႔အတူ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ေနပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ Radio သတင္းတစ္ခုမွာ Zombie ေတြက လူေတြကို လုိက္လံ တုိက္ခိုက္ေနၿပီး သူတို႔အကိုက္ခံရသူေတြဟာလည္း Zombie ေတြ ျဖစ္ကုန္ေၾကာင္း ၾကားသိလုိက္ရပါတယ္။ Lane နဲ႔ မိသားစုဟာ ဒီ Zombie ေတြ တုိက္ခိုက္တာ မခံရခင္ေလးတင္ပဲ တုိက္ေခါင္မိုးတစ္ခုေပၚကို တက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး Lane ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း Thierry Umutoni က ေစလႊတ္လုိက္တဲ့ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကမ္းေျခရွိ သေဘၤာတစ္စီးေပၚတြင္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပညာရွင္ေတြ စု႐ံုးၿပီး ဒီျပႆာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဇီဝပညာရွင္ ေဒါက္တာ Andrew Fassbach က ဒီျပႆနာဟာ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ...
IMDB: 7.0/10 556,766 votes
Snatch (2000) Jason Statham, Brad Pitt တုိ႕ပါ၀င္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ။ နည္းနည္းၾကာေနေပမဲ့ မၾကည့္ရေသးသူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
IMDB: 8.3/10 715,073 votes